၂၀၂၀-၂၀၂၁ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်း ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ) တို့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်း၊၊ …
December 14, 2020 / Events
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း …
December 10, 2020 / Events
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို zoom online meetingဖြင့် ကျင်းပရာတွင် တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာ (ဌာနမှူး)၊ သင်တန်းရေးရာဌာနမှူးနှင့်အတူ ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် သံတွဲမြို့တို့တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား …
ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း၊၊ …
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(Doctor of Law in International Relations) ပညာသင်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ။ ဒေါက်တာခင်မြတ်ကျော်သူ (ကထိက၊ သမိုင်းဌာန)၏တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(Doctor of Law in International Relations) ပညာသင်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ …
December 8, 2020 / Events
တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု …
We Love Yangon လူထုအခြေပြု ပရဟိတအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း ဟောပြောမှု Facilities Quarantine Centre တွင် နေထိုင်သူများကို We Love Yangon လူထုအခြေပြု ပရဟိတအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း ဟောပြောမှု …
တည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း တည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း …
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ရာပြည့်သဘင်အထိမ်းအမှတ် ဗဟိုအဆင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲနှင့်ရသစာတမ်းပြိုင်ပွဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ရာပြည့်သဘင်အထိမ်းအမှတ် ဗဟိုအဆင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲနှင့်ရသစာတမ်းပြိုင်ပွဲ …
တက္ကသီလာမဟာပညာဆုတောင်းပြည့်စေတီတွင် ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းနှင့် ဆီးမီးတစ်ထောင်၊ ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ခြင်း တက္ကသီလာမဟာပညာဆုတောင်းပြည့်စေတီတွင် ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းနှင့် ဆီးမီးတစ်ထောင်၊ ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ခြင်း …
၂၀၂၀-၂၀၂၁ နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသန Proposal Presentation ၂၀၂၀-၂၀၂၁ နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသန Proposal Presentation အခမ်းအနား …
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်မိသားစု မဟာဘုံကထိန်အလှူတော် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်မိသားစု မဟာဘုံကထိန်အလှူတော်ကို သုဓမ္မာလင်္ကာရကျောင်းတိုက်သို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်၊၊ …
COVID-19 ကာကွယ်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့များမှ ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း …
June 2, 2020 / Events
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင် ဦးဆောင်၍ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များမှ တာဝန်ရှိသူများ ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်ရှိ Facility Quarantine Center သို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်း (၅-၄-၂၀၂၀) There is no gallery …
COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုများ …
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကင်းထောက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနား …
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား …
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ …
ပတ္တမြားရတုအထိမ်းအမှတ် ပန်းခြံနှင့်ကမ္ဗည်းကျောက်စာတိုင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား …
(၁၇)ကြိမ်မြောက် နေ့သင်တန်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား …
Paukpaw Scholarship Project DSC 8045 Aperture: 5Camera: NIKON D7000Iso: 500Orientation: 1 « ‹ 1 of5› » …
November 14, 2019 / Events
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်နှင့်အဖွဲ့ ခရီးစဉ် …
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉) There is no gallery selected or the gallery was deleted …
ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှု « ‹ 1 of 10 › » …
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး လာရောက်စဉ် There is no gallery selected or the gallery was deleted. …
(၁၇၃)ကြိမ်မြောက် ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်၊ အဝေးသင်သင်တန်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား There is no gallery selected or the gallery was deleted. …